Lufthansa iji ụgbọ elu na-enweghị nkwụsị si Frankfurt gaa San José, Costa Rica na 2018
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Lufthansa iji ụgbọ elu na-enweghị nkwụsị si Frankfurt gaa San José, Costa Rica na 2018
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Costa Rica • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Mgbasa Ozi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Ozi ọma maka ndị niile Fans na Central America: Lufthansa ga-agụnye njikọ Frankfurt - San José na oge ezumike 2018 nke ụgbọ elu ha. Site na 29 Machị 2018, ụgbọ elu Lufthansa na-abụghị elu ga-efe na Tọzdee na Satọde ọ bụla site na Frankfurt ruo isi obodo Costa Rica, 'paradaịs akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Central America'.
Njikọ a bụ njikọ nke abụọ enyere ụlọ ọrụ si Frankfurt na mpaghara a na - enweghị nkwụsị - nke mbụ bụ njikọ si Frankfurt na Panama. Njikọ abụọ ahụ na-akwado ibe ha n'ụzọ zuru oke. Yabụ ịnwere ike ịgbago San José ugboro asaa n'izu ụka site na Frankfurt: ugboro abụọ na-enweghị nkwụsị na Lufthansa, ma ọ bụ ugboro ise site na Panama na ụgbọ elu dị mkpirikpi na onye ọrụ Lufthansa Copa Airlines.
Costa Rica na-ejikọ ala ndị na-adọrọ mmasị, oke ojii, oke mmiri Caribbean na osimiri ndị nwere nnukwu ogige mba na oke mmiri ozuzo, yabụ ndị njem kachasị mkpa njem nlegharị anya dị mkpa gburugburu ebe obibi.
Gbọ elu na-aga San José na-eji Airbus A340-300, nke nwere oche 279 na-ekpuchi Klaasị Azụmaahịa, Nchịkwa Ego na Akụ Ahịa. LH518 na-ahapụ ụlọ ọrụ Lufthansa Frankfurt na 13: 45 wee rute San José na mbubreyo n'elekere 17:55. Gbọ elu nlọghachi na San José na mgbede na 19:50 wee rute na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt n'echi ya na 15: 10 mgbe oge ụgbọ elu gbara ihe dịka elekere 11.
Maka ama ndị ọzọ na ịdebanye ụgbọ elu Lufthansa, gaa LH.com na orntanetị ma ọ bụ kpọọ Servicelọ Ọrụ Ọrụ Lufthansa na + 49 (0) 69 86 799 799 (ọnụọgụ akara akara). Enwekwara ike ịgba akwụkwọ ụgbọ elu na ndị ọrụ ụlọ ọrụ njem njem Lufthansa, yana ndị na-ere ahịa ụgbọ elu Lufthansa n'ọdụ ụgbọ elu.
Njikọ ọhụrụ na ilekiri
• Ugboro abụọ n'izu (Tọzdee, Sat ruo 29 Mach 2018)
• Ahịa: site na 881 euro gụnyere ụtụ isi na ụgwọ
• Ogologo: 9.362 km (5.055 nautical kilomita)